SomaliTalk.com » islii
Home » Qoraallada Halkudhegga "islii"
Inta la xaqiijiyay illaa Laba qof ayaa ku dhaawacantay Qaraxyo Seddax ah oo habeenkii Xalay ahaa ka dhacay Xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee Islii ee Magaalada Nairobi. Qaraxyadan ayaa sida lagu soo waramay ka dhacay goob Baar ah oo ay ku Caweeyaan Keenyaahanka laguna Magacaabo Xaafadda Jaamka ee Islii halkaasoo sida la sheegay Salaaddii Maqrib kaddib uu soo maray Gaari kaasoo Seddax Bum ku...
Iyadoo weli ay taagan tahay Qalalaasha ka jira Magaalada Nairobi gaar ahaan Xaafadda Islii iyo Gobolka “waqooyi Bari” ee Soomalida Degto ayaa Shiikh Cabdi Umal oo ka mid ah Culimada waaweyn Soomaaliyeed ee ku sugana Dalka Kenya ayaa weli Wada Baraarujinta iyo wacyigelinta dadka Soomaaliyeed ka dib markii ay dhacewen dhowr weerary oo la Damcsanaa in lagu boobo Suuqa ugu weyn Afrikada Bari...
Saddex qof ayaa dhintay habeenimadii Jimcada (ee Sabtidu soo geleysey), waxaa kale oo ku dhaawacmay siddeed qof oo uu ka mid yahay xildhibaan Yuusuf Xasan oo laga soo doorto Kamukunji Nairobi, kaddib markii qarax ka dhacay meel u dhow Masaajid oo ku taal xaafadda Eastleigh (Islii) ee magaalada Nairobi, sidaas waxaa qortay jariidada Standard. Laba qof oo kale ayaa u dhintay dhaawacii. Qaraxaasi waxa...
Kiiska canshuur ka qaadista xaafada Eastleigh oo bilooyinkan ugu dambeeyey socdey oo u muuqda mid soo dhamaaneysa.
Waxaa bilooyiinkii uggu danbeeyay socday kiis maxkamadeed oo ku saabsan canshuur ka qaadista xaafadan Eastleigh. Kiiskani oo ay maxkamada geeyeen guddiga ganacsatada xaafada Eastleigh oo muda soo daba jiitameysay ayaa waxey shalay xukuntay maxkamada in maadaamaa canshuurta qaadisteeda aan la joojin karin loo baahan yaahay in guddiga ganacsatada ee xaafadda iyo “City Council” dowladda hoose ay...